IBlue Nose Pitbull: Okudingeka Ukwazi Nge 'Inja Yabantu' - Izinhlobo
I-Blue Nose Pitbull: Okudingeka Ukwazi Nge 'Inja Yabantu'
Wonke umuntu uyazi inhlamba eyenza iPitbull idume kabi. Yize kuqondwa kabi njengezinja ezinonya, lolu hlobo olusha luzokhipha konke ukunganaki okuzungeze izinja nge- 'Pitbull' egameni lazo.
Ngibingelele Inja Yabantu , I-Blue Nose Pitbull .
Funda umhlahlandlela wethu nge-Blue Nose Pit bese uthola ukuthi ngabe yinja lena engekho empilweni yakho!
Yini i-Blue Nose Pitbull?
Kungani i-Blue Nose Pitbulls ingavamile?
Izici ze-Blue Nose Pitbull
Izidingo zokuzivocavoca zeBlue Nose Pitbull
Ukuqeqesha i-Blue Nose Pitbull yakho
Ukunakekela i-Blue Nose Pitbull yakho
Ungathenga kuphi imidlwane yeBlue Nose Pitbull
Izinzuzo nezingozi zeBlue Nose Pitbull
I-Blue Nose Pitbull akuyona uhlobo lwayo oluhlukile lwe-Pitbull. Kunezinhlobo ezintathu kuphela eziyinhloko zePitbull namuhla: I-American Pit Bull Terrier (IPittie noma iPit), i- I-American Staffordshire Terrier , kanye I-Staffordshire Bull Terrier .
IBlue Nose Pit uhlobo lwe-American Pit Bull Terrier. Njenge- Inkunzi Emgodini Ebomvu Ekhaleni , lathola igama lalo kwelalo Umbala ohlukile .
Ama-Blue Nose Pitties ane- umbala o-blue-grey esikhunjeni sabo. Amehlo nezinzwane zabo ngokuvamile ziba ngumthunzi ofanayo, futhi.
Lo mbala oyingqayizivele ubangelwa isakhi sofuzo, esidala ukukhiqizwa kwe-melanin okungavamile . Umthunzi ungahluka ngePhunga ngalinye le-Blue Nose Pit (kusuka kokumnyama kuye kokuluhlaza okwesibhakabhaka), kuya ngenani le-melanin esikhunjeni sayo.
Futhi, naphezu kwegama lazo, lezi zinja azinawo amakhala aluhlaza okwesibhakabhaka. Amakhala abo angaphezulu kombala ompunga, anombala oluhlaza okwesibhakabhaka nje. Lokhu kufaka imibala ngenja ene- ukubukeka okumangazayo .
I- ufuzo olweqile lokho okubangela umbala ompunga akuvamile kumaPitties, futhi kuyivelakancane kakhulu kumaPitbull amabili nalesi sakhi sofuzo esizalanayo.
Ngokunikwa amathuba amancane okukhiqiza iBlue-Nosed Pittie, abanye abalimi basebenzisa izindlela ezahlukahlukene ukwenza isiqiniseko sokuthi bathola imidlwane yeBlue Nose Pitbull.
Laba bazalisi baphendukela ku ama-Pitties wokuzalela kusuka kudoti ofanayo, naphezu kwemiphumela empilweni yenja, ukwenza imali ngokufunwa kwalezi zinja.
Umgodi wempumulo iBlue is a okulingene inja engakhula ibe yinde njenge Amasentimitha angu-14 kuya kwangu-24 (Amasentimitha angama-36 kuye kwangama-61), kepha ingaba nesisindo esilingana nesi 85 amakhilogremu (Ama-39 kgs)!
Kungakho abanye abantu nezinja besatshiswa ngezabo imilenze eqinile , isifuba esibanzi, nokuqina, ukuma okuqinile.
Ukubukeka kwazo kuhambisana nemvelo yangempela yeBlue Nose Pittie, noma kunjalo.
Ukubheka okukodwa kwale Pittie ukumamatheka kophawu lokuhweba futhi umsila wayo onyakazisa ngokujabula uzokutshela ukuthi lolu hlobo luhle kangakanani futhi lunothando kangakanani.
Ngaphandle kombala wabo oyingqayizivele, amajazi abo ayafana nePittie ejwayelekile: mfushane, ithambile, futhi isilika .
Ungahluleli i-Blue Nose Pitbull ngekhava yayo
Akunandaba ukuthi babukeka behluke kanjani ngokumangazayo, abantu abaningi basakhathazeka ngalezi zinja zePitbull.
Kepha bewazi ukuthi amaPitbulls athole amaphuzu eduze Ukubuyisa Okusagolide phakathi ukuhlolwa kobumnene ? AmaPitbulls, ngokuvamile, abizwa njengolaka ngenxa yomlando wawo wokusetshenziswa ekulweni nezinja, kepha konke lokho akulona iqiniso.
Ama-Pitbulls ezinye zezinja ezingabikezelwa emhlabeni we-canine. Kunjalo onothando izinja ezinemvelo ezolile.
AmaPitties amaningi ayalingana ubumnene nezingane . Ngokwakhiwa kwabo okuqinile, ngeke babe nankinga ngokugonwa ngokuqinile ngabancane emndenini wabo.
Uma ufuna ukuba neBlue Nose Pitbull emndenini wakho, lungela ukuba ne- okucacile inja. Lezi zinja azinawo umqondo wesikhala somuntu siqu futhi zizokwengamela amalungu omndeni lapho kungenzeka khona.
Ingabe i-Blue Nose Pitbulls iyingozi?
Ukuhlukumeza kwenja kuvame ukuba ngu- ukubonakaliswa komnikazi wazo hhayi ngobunjalo bayo. Noma iyiphi inja izoba nokuthambekela kokuqhuma futhi ilume lapho inganakwa, iphathwa kabi futhi isongelwa.
Ikhuliswe kahle, iBlue Nose Pitbull iyi- mthandeni futhi enobungane isidalwa esithanda ukudlala futhi sifunde nomuntu waso esithandayo.
Leyo yinto ngalolu hlobo; iyathanda ukusebenzisana nabantu. Iningi labo ngeke libe izinja ezinhle zokubuka noma izinja eziqaphile ngoba zizobingelela abantu ezingabazi ngomsila wokuzulazula nangokwanga okuncibilikisayo.
Lolu hlobo luyi- umngane oqotho , futhi. Bazokukhombisa ukuthi bakuthanda kangakanani ngokuvikelwa kwabo. Uma iBlue Nose Pitbull izwa ukuthi kunosongo oluzungezile, bayovikela ipakethe yabo ngaphandle kokungabaza.
Ama-Blue Nose Pitbulls, noma kunjalo, c rave ukunakwa okukhulu kangangokuba bangashesha ube nomona uma enye inja kungena esithombeni. Leyo yinto ongaqeqesha ngaphandle kwePittie yakho ngokusebenzisa umphakathi.
Yize emnene, iBlue Nose Pit iyinja esebenzayo leyo uthanda ukweqa phezulu !
Kodwa-ke, konke lokho kweqa akwanele ukwanelisa izidingo zokuzivocavoca zalesi siqinile zala .
Zilungiselele ngoba le nja idinga okungenani ihora elilodwa nemizuzu engama-30 yokuzivocavoca nsuku zonke.
IPittie yakho izothanda ukuhamba amabanga amade endaweni yangakini noma uhambo oluya epaki yezinja, lapho ingagijima khona ihlole imvelo.
Qaphela ukumletha epaki yezinja, noma kunjalo, ngoba kungamdalela eyakhe inyamazane drive nokuthambekela komona. Ukuzijabulisa okufanele ngesikhathi sobuntwana kungasiza ukunqanda lokhu kuziphatha.
Le nja nayo izochuma ekhaya elizobanikeza yona isikhala esiningi ukuhambahamba ngokukhululeka. Vele uqiniseke ukuthi igceke lakho langemuva linocingo lokugcina iPittie yakho ingahloli ngaphandle kwempahla yakho.
Ngaphandle kokuzivocavoca, iBlue Nose Pitbull yakho ingaba yimbi, ikhuluphele, futhi ivila. An indlela yokuphila esebenzayo uzoqinisekisa ukuthi uyajabula futhi unempilo.
Bangaba nokubukeka oku-goofy, okungenakunqunywa ebusweni babo, kepha iBlue Nose Pitbull iyi- uhlakaniphe kakhulu inja ongakwazi isitimela kahle.
Uma ukhathazekile ngezinkinga zobumnene, siphakamisa ukuthi unamathele nomdlwane weBlue Nose Pitbull. Imidlwane isebenza kakhulu futhi ivulekele ukufunda.
Kumele qala ukuqeqesha kanye nokuxhumana nabantu ngokushesha nje lapho uletha inja yakho ekhaya. Ukubekezela okuthile kungadingeka, njengoba imidlwane ivame ukuphazamiseka kalula.
Okubalulekile ngokuqeqesha iPitbull ukuthi uzimise njengo i-alpha . Lokhu kuzomsiza ukuthi aqonde indima yakhe ephaketheni, kumenze abe sethubeni lokulandela imiyalo yakho.
Ukuqiniswa okuhle njengokuphatha nokudumisa kuhamba ibanga elide lapho ufundisa indlela efanelekile emgodini we-Blue Nose Pit. Ungazami nokuzama ukumthethisa, ngaphandle kokuthi ufuna ukubona ukuphoxeka ebusweni bakhe obumnandi.
Uma udinga usizo, futhi ungaletha iBlue Nose Pittie yakho emakilasini okulalela ukuze uthole usizo ngakho konke inja yakho edinga ukukufunda.
Imigodi Emidala Yeblue Blue ngamacala ahlukile. Bazoba nzima kakhulu ukuqeqesha njengoba kungenzeka ukuthi bese bevele bewele emikhubeni emibi okungaba nzima noma kube nzima ukuyisusa.
Yize Imigodi yeBlue Nose ibukeka njengezinja ezinempilo ezingadingi ukubhekelwa, zisadinga ukunakwa nothando oluningi.
Ulunakekela kanjani lolu hlobo ngaphakathi nangaphandle?
Ukulungisa iPitbull esebenzayo kakhulu
Ukuxubha ibhantshi lakhe kanye ngeviki kwanele. Ukuxubha njalo kuqinisekisa ukuthi owoyela bemvelo basatshalaliswa ngokulinganayo engutsheni emfushane yePittie futhi kusiza ukugcina ukuchitheka kulawulwa.
AmaBlue Nose Pitbulls achitha inani loboya obuphansi kuya kokulingene. Ngeshwa, lokhu kusho ukuthi la maPitbull hhayi i-hypoallergenic .
Njengoba kunikezwe ukuthi uyinja enamandla, ungalindela futhi nokuthi iBlue Nose Pit yakho iye juluka kakhulu !
Qiniseka ukuthi uhlala ehlanzekile (futhi enuka kamnandi) ngu ukugeza okungenani kanye ngenyanga. Lokhu kubaluleke kakhulu uma uhlala efulethini.
Ungakhohlwa ukuxubha zabo amazinyo , bahlanze labo izindlebe , futhi nquma izinzipho zabo , engakhula ngokushesha okukhulu. Ama-Active Blue Nose Pits angahle adilike phansi izinzipho zawo, okusho ukuthi ukusikwa okungajwayelekile kuwe.
Ukudla okulungele inja ye-buff
Ukudla okunomsoco kungenye ingxenye ebalulekile yempilo yenja ngayinye, futhi nenani lokudla okunikeza iBlue Nose Pitbull yakho lizoxhomeka ezintweni eziningi, ezinjengobudala bayo nezinga lomsebenzi.
Ngomdlwane weBlue Nose Pitbull, kuhle ukuthi adle isamba 1 inkomishi yokudla kwenja eyomile, yabelwa ekudleni kathathu ngosuku.
Umgodi Omdala weBlue Blue unganikezwa i-kibble Izikhathi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngosuku ukuphehla amandla abo. Yondla ama-calories akho angama-30 ePittie ngekhilogremu ngalinye lesisindo somzimba.
Qiniseka ukuthi ukudla kwenja okukhethayo kungahlangabezana nezidingo zansuku zonke zePitbull zokudla okunempilo. I-Kibble enothe ngamaprotheni, ngokwesibonelo, ingasiza iBlue Nose Pittie gcina imisipha yakhe futhi aqinise amalunga akhe.
Amafutha agcina ijazi lakhe iyacwebezela futhi inempilo ngenkathi emnikeza amandla anele okwenza umsebenzi wakhe wokuzivocavoca. Yize zingaba umthombo wamandla, ama-carbohydrate akuyona into ephambili ekudleni kwe-Blue Nose APBT.
Ukudla kokudla okuluhlaza kungasebenzela le Pitbull, kepha ngaso sonke isikhathi kuwumqondo omuhle ukuxhumana nodokotela wezilwane ngaphambi kokushintsha noma yini ekudleni kwenja yakho.
Izinkinga zezempilo i-Blue Nose Pitbulls engaba nazo
Ama-Pitbulls ngokuvamile aphilile, kepha, ngoba uhlobo lwawo luvela ku- ichibi elincane lezakhi zofuzo , I-Blue Nose Pitbulls ithambekele kakhulu ezinkingeni zofuzo.
La maPitties angabanjwa yisifo senhliziyo, kanye nokusebenza okungafanele kohlelo lokuvikela omzimba nolwezinzwa.
Bajwayele ukungezwani nezinto ezithile futhi izinkinga zesikhumba , futhi. Ngakho-ke qaphela ukuqubuka noma okunye okungahambi kahle esikhunjeni sabo futhi unganqikazi ukuyisa inja yakho kudokotela wezilwane.
I-Blue Nose Pitbull yakho inesikhathi sokuphila se- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-16 . Ngokuphila ngendlela enempilo nokuhlolwa njalo kokuphila kahle, izinkinga eziningi zempilo zingagcinwa zikhona.
Ucabanga ukuthi ungaphatha iBlue Nose Pitbull futhi ube ngumholi wepakethe oqinile kuye?
Lapho-ke sekuyisikhathi sokubheka umdlwane weBlue Nose Pittie ongaya nawo ekhaya.
Uzothola imithombo eminingi yale nja, kepha into eyodwa okufanele uyikhumbule ukuthi akubona bonke abalimi bePitbull abanayo imikhuba yokuzalanisa yokuziphatha .
Gwema imikhonyovu futhi ufune umfuyi okhathalele impilo nenhlalakahle yemidlwane yakhe.
Uma ungenaso isikhathi sokuqeqesha umdlwane wePitbull, noma kunjalo, ungakhetha ukwamukelwa .
Ama-Pitbull amaningi agcina ezindaweni zokukhosela futhi asindise ngoba abanikazi bazithatha kancane izidingo zalezi zinja uma kuziwa ekuqeqesheni nasekuzivocavoca umzimba.
Abazalisi abathembekile be-Blue Nose Pitbull
Ngaso sonke isikhathi yenza ucwaningo lwakho ngaphambi kokuthenga umdlwane kunoma yimuphi umuntu ongase abe ngumkhiqizi. Imidlwane eqhamuke ekuzalelweni iyoba nezinkinga eziningi zempilo futhi ingaba nezinkinga ezimbi zomoya.
Kufanele uxoxisane kuphela nabalimi abahloniphekile abasebenza ukuhlolwa kofuzo ukulawula izimo zezempilo ngaphambi kokuba kuqale inqubo yokuzalanisa.
Imvamisa, injana yeBlue Nose Pitbull ibiza nxazonke $ 1000 kuye ku- $ 3000 . Hlala kude nabafuyi abathi imidlwane yabo inezici ezikhethekile futhi ibiza amanani aphezulu.
Ukukusiza ngosesho lwakho, nazi ezinye izinhlobo zokufuya ezihlonishwayo ongathintana nazo:
Imigodi Emililo Eluhlaza Okwesibhakabhaka (ENyakatho neNew York)
Ama-Pitbulls amahle kakhulu enziwe
Ukuthola i-Blue Nose Pitbulls Yokutholwa
Ukwamukela i-Pitbull kukunikeza ithuba lokuhlinzeka inja edinga ikhaya elihlala njalo. Uma unolwazi ngePitbulls, ukuthola i-Blue Nose Pittie yabantu abadala ngeke kube yinkinga kuwe.
Bheka lawa mawebhusayithi ahlinzeka ngemizi yesikhashana yama-APBT alinde umndeni wawo waphakade ukuthi awathathe:
Ukutakulwa KwePittielove (ENgilandi)
Ukutakulwa Kwenja Yomgodi Wothando (ITexas)
Iqiniso ukuthi, iBlue Nose Pitbull iyi- ngokomzwelo , mnene , futhi unomusa inja. Uma usuqeqeshe wakhulisa eyodwa, uzitholele i- onothando , umngane oqotho okwempilo.
Bayinja enhle kakhulu emindenini, noma ngabe unezingane! Kepha uma ufuna inja yokubuka, iBlue Nose Pit yiyo inobungane kakhulu ngalokho.
Amaqhawe empelasonto kufanele ahlukane nalolu hlobo njengoba edinga ukuzivocavoca okukhulu nsuku zonke. Uma ufuna inja egxumayo futhi ejabule ukudlala nayo noma umngane we-canine ngamajogu ajwayelekile nokuhamba ngezinyawo, khona-ke lena inja ekufanele.
Unayo i-Blue Nose Pitbull? Sabalalisa iqiniso ngamaPitties amnandi futhi usazise ukuthi uthini ngale nja. Shiya amazwana ebhokisini elingezansi.
I-Labradoodle yase-Australia: Amaqiniso ayi-15 amangalisayo okwenza wonke umuntu athande lolu hlobo
Umhlahlandlela Ophelele Ku-Blue Tick Beagle Dog
umehluko phakathi kwe-labrador ne-retriever yegolide
umalusi wase-Australia ophuzi we-lab mix
inkunzi mastiff hlanganisa nelebhu
inja enehlosi njengemivimbo
ithoyizi elincane likhule ngokugcwele
ukufaka i-harness enjeni